Cloud of Luster Weddinglọ Oriri Agbamakwụkwọ - Imewe Mmewe
Weddinglọ Oriri Agbamakwụkwọ
Weddinglọ Oriri Agbamakwụkwọ Igwe ojii na-ahụ maka luster bụ ụlọ ekpere dị n'ime ụlọ a na-eme agbamakwụkwọ na Himeji, Japan. Thekpụrụ ahụ na-anwa ịtụgharị mmụọ ememme agbamakwụkwọ n'oge a gaa n'ọhịa. Lọ ụka ahụ achachaala, igwe ojii na-ekpuchi ihe fọrọ nke nta ka ọ bụrụ iko gbara agba na-emepe ya na ogige gbara ya gburugburu na mmiri mmiri. A na-eji ogwe osisi dị ogidi dị ka isi iyi na-ejikọ ha na obere ụlọ. Soclọ uka a na-ahụ maka mmiri bụ ụzọ dị omimi na-eme ka nhazi ahụ niile yie ka ọ na-ese n’elu mmiri wee mee ka ịdị ọcha ya dị n’otu.
Aha oru ngo : Cloud of Luster, Aha ndị na-emepụta ya : Tetsuya Matsumoto, Aha onye ahịa : 117 Group.
Weddinglọ Oriri Agbamakwụkwọ Tetsuya Matsumoto Cloud of Luster